FAMPANDRIAMPAHALEMANA: Notokanan’ny Filoha ny « Base Opérationnelle avancée » ao Iakora – Free News
mercredi, 8 décembre 2021 - 11:37
Nidina ifotony tao Iakora ny Filoha Andry Rajoelina omaly.
Accueil/Politika/FAMPANDRIAMPAHALEMANA: Notokanan’ny Filoha ny « Base Opérationnelle avancée » ao Iakora
Vata miaramila miisa 80 no hitoetra ao amin’ity toby miaramila goavana vao napetraky ny Fanjakana ao amin’ny Distrikan’Iakora ity. Tonga nitokana izany ny Filoha Andry Rajoelina omaly, niaraka tamin’ny delegasiona notarihiny, izay nanamafy fa ho vahaolana maharitra amin’ny resaka tsy fandriampahalemana any amin’ity Distrika ity ny fametrahana ny « Base Opérationnelle Avancée ».
Lucien R. 21 mai 2021
Tonga ny fotoana hampandrosoana an’Iakora, hoy ny Filoha Andry Rajoelina, omaly, nandritra ny fitokanana ny « Base Opérationnel Avancée » (BOA), izay hiantoka ny fampandriana tany any an-toerana. Fotodrafitrasa entina hiadiana amin’ny tsy fandriam-pahalemana ny BOA, hamongorana hatrany aminy fakany ny asan-dahalo, hoy ny Filoha. Nambarany fa nihena hatrany amin’ny 50% ny asan-dahalo manerana ny Nosy tao anatin’ny roa taona. “Mipetraka hoan’ny vahoakan’i Iakora ity ka mino aho fa ho foana ny asan-dahalo. Izay no tanjona apetratsika”, hoy ny Filoha.
Fantatra fa miisa 80 ireo vata miaramila honina sy hampandry fahalemana ao Iakora. Nilaza ny Filoha fa hisy fandraisana ho mpiasam-panjakana maromaro hatao amin’ny sehatry ny fampandriana fahalemana. Ka ny hipetraka amin’ny BOA dia tsy maintsy hisy fakana tanora avy any an-toerana ihany. Notsindrian’ny Filoha fa manarapenitra tanteraka ity fotodrafitrasa napetraka tao Iakora ity. “Tafika manakaiky vahoaka hoan’ny Tanindrazana no tanjona”, hoy ny fanazavana.
Nandritra ity fitsidihany ny Distrikan’Iakora ity dia nisy ny fanolorana jiro mandeha amin’ny herin’ny masoandro ho an’ny isan-tokatrano. Nitokana ny tranompokonolona ihany koa izy tao Iakora. Tao anatin’ny 22 taona dia tsy nisy Filoham-pirenena tonga nitsidika tao an-toerana. Tamin’ny 1998 no nitsidika tao ny filoha Didier Ratsiraka, raha ny fanazavana. “Maro ny fotodrafitr’asa sy ny tetikasa hotanterahina eto Iakora ary anisan’ny lohalaharana amin’izany ny fanamboaran-dalana satria dia tany lavitr’andriana tokoa ity Distrika ity”, hoy ny fampitam-baovao.
Nitsidika an’i Ranohira
Rehefa avy tao Iakora dia nihazo an’i Ranohira ny Filoha. Nisy ny fitokanana ny CSB2 manarapenitra izay vao vita, sy fizarana jiro “Hazavana ho anao” . Marihina fa taminy tetezamita no nanamboatra ny CHRD ho an’i Ranohira ny Filoha Andry Rajoelina. Io hopitaly io izay ampiasaina ankehitriny manoloana ny ady amin’ny Covid-19. “Manomboka izao tsy maintsy mandroso Ranohira », hoy ny Filoha. Nambarany fa ny csb2 manarapenitra dia misy ny fitaovana rehetra ahafahana mitsabo ny olona marary, toy ny “pharmacie”, “concentrateurs d’oxygène sy bouteille d’oxygène”, sy ny sisa. Nandritra izao fidinana ifotony nataony izao, nanome ny tambin-karama manokana ho an’ireo mpiasan’ny fahasalamana ny tenany, niaraka tamin’ny fanomezana CVO.
RAHARAHA FIFOFOANA NY AIN’NY FILOHA : Samy miandrandra ny hivoahan’ny marina ny Filohan’ny Antenimiera roa tonta
RAHARAHAM-PANJAKANA: Notokanana ny “Hotel des Finances” ao Sambava
AFRIKA TAORIAN’NY COVID-19: Hofaritana anio any Abdijan ireo sehatra mila famatsiam-bola maika
TAONA 2020: Nanjakan’ny demokrasia ny tontolo politika teto Madagasikara